Auto Clay Block Equipment, Auto oghere Clay Block Machine - Bricmaker
Ihe BricMaker guzobere ihe karịrị usoro 2000 wee ruo ugbu a n'ụlọ na mba ofesi, BricMaker na-ekwe nkwa ọrụ ndị ahịa yana akụ na ụba, nchekwa gburugburu ebe obibi, nchekwa ike, akpaaka, na ngosipụta nhicha, iji nyere ụlọ ọrụ ndị ahịa anyị aka inweta uru akụ na ụba ma ghọta uru ndụ!
KA Ọ B AN ỌMPTA NKE Briki Onye rụrụ
Iji bụrụ ọkachamara nke onye na-eme brik, ị ga-atụle n'ụzọ zuru ezu ihe 4 na-esonụ maka ịtọlite ​​osisi brik ọhụrụ na nke oge a: Nkọwapụta Akụrụngwa, Nhazi Injinia, Nhọrọ Nhọrọ, Nhazi Nhazi. Anyị BricMaker ga-achọ ịkọrọ gị ụlọ ọrụ brik anyị afọ iri abụọ ahụ ma nye gị ezigbo ngwa ọrụ na teknụzụ teknụzụ, iji nyere gị aka inweta uru akụ na ụba ka ukwuu ma ghọta uru ndụ gị bara!
Ugboro abụọ Grouping & Robot stacking
Nnọọ Onye BricMaker
Imepụta brik akụrụngwa, àjà emebe alo nke Adobe osisi, n'ekwú ọkụ ahụ emebe & ewu na akpaka mmepụta ngwọta.
BricMaker ọkachamara maka ụrọ (sintered) brik akụrụngwa n'ichepụta, R&D, n'ekwú ọkụ na akpaaka brik osisi ngwọta. BricMaker na-ekpuchi ihe karịrị 10 acres, nwere ihe karịrị 30,000 square mita nke oge a, yana mkpokọta ego nke 30 nde US Dollar, yana ihe fọrọ nke nta ka ndị ọrụ 200 gụnyere ndị ọkachamara 90 ọkachamara & ndị injinia. Na-adịbeghị anya 10 afọ, BricMaker mere nnukwu investments maka ụrọ (sintered) brik equipments R&D, nakweere elu mmepụta technology na tooling equipments, nyere mbara brik osisi ngwọta na akụrụngwa ule nyocha, mmepụta engineering emebe, n'ekwú emebe ewu, equipments echichi & nyere, ọkachamara oru ọzụzụ wdg Inye ike oru nkwado maka multitudinous brik ụlọ ọrụ ma n'ụlọ na mba ọzọ.
USD 30 nde +
otu 90 +
nyere 2000 +
Workshoplọ ọrụ mmepụta ihe
BricMaker na-arụpụta brik akụrụngwa, na-enye brik osisi ịkepụta alo na ngwọta akpaka.
Gịnị bụ ihe ikpeazụ gị iche na echiche ngwaahịa? Gịnị bụ gị ikpeazụ ngwaahịa branding ọkwa na ahịa? You ga - achọ ịmepụta brik ma ọ bụ brik dị elu n'ahịa gị? Iji kwe nkwa inweta ngwaahịa dị elu nke brik ma ọ bụ ngọngọ, ị ga-atụle nke ọma nụchaa ngwa ọrụ na ịka nká, ike nke brik na-acha akwụkwọ ndụ, ngọngọ nke ngwaahịa na ike.
Na mmepe nke ahịa, n'oge a na-ere ngwaahịa na asọmpi na-ekpo ọkụ. Have ga-atụle n'ụzọ zuru ezu brik osisi itinye ego na ikike dị elu, gbasaa ọnụ ọgụgụ akụnụba gị, si otú a jigide uru gị nke asọmpi ahịa ma jigide ezigbo mmepe.
Anyị Bricmaker chere na n'ichepụta na-eri management bụ isi ihe nke ọ bụla Adobe factory. Dịka ọmụmaatụ, ụgwọ akụrụngwa, ụgwọ mmiri na ikike, ụgwọ akwụkwọ ntuziaka, ịchekwa ego nke akụrụngwa, akụkụ mapụtara na akụrụngwa nke akụrụngwa, ma ọ bụrụ na ị na-eme ezigbo njikwa maka akụkụ ndị ahụ na -emepụta ma na-eme ka ọ nwekwuo nhazi, yana ezigbo ahịa nke Emechara ngwaahịa, anyị kwenyere na osisi gị ga-aga nke ọma ma na-arụ ọrụ mgbe niile.
Anyị Bricmaker na-enye gị sistemụ ọrụ site na brik osisi mbụ alo, brik na-eme niile dị iche iche akụrụngwa nyochasịrị na ule, dum osisi engineering emebe, equipments na-ahọpụta nkwanye, ikpeazụ osisi management normalizing ndụmọdụ, ígwè ndụ na-adịru mgbe-sales ọrụ, mapụtara na ngwa akụkụ nke equipments àjà. Riclọ ahịa ụlọ ahịa Bricmaker na-enye gị ọrụ ịzụ ahịa na nkwụsị zuru oke na nghazi nghazi isi ma n'ụlọ ma na mba ofesi.
Iji kacha ọnụ ntuziaka na-eri nke n'ichepụta brik, akpaaka bụ-apụghị izere ezere na-emekarị nke brik osisi development. Clay brik / ngọngọ osisi akpaaka gụnyere ndị na-esonụ: dị iche iche akụrụngwa kenha, atọ ruru; ihe oriri na-achịkwa akpaaka; brik na-acha uhie uhie / mgbochi ịcha-nchịkọta-njem-nchịkọta usoro; ọwara n'ekwú ọkụ na-arụ ọrụ, usoro kpo oku a na-ebugharị; Emechara ụrọ brik / usoro mbukota usoro.
You nweghị ike ịgbanwe asọmpi na-ekpo ọkụ n'ahịa, ihe anyị nwere ike ime naanị gbalịa ị nweta ọnụahịa nrụpụta dị ala. Anyị nwere ike na-enye gị àgwà na ngwá na Adobe osisi elu emebe, jiri ya tụnyere ndị ọzọ na otu ma ọ bụ yiri na-enye, anyị na ngwaahịa na emebe na ike ịzọpụta 30 ~ 40%, na elu arụmọrụ 130% +.